URSA အသံလွှင့်ဌာနများသည်ချီလီနိုင်ငံရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး Amorala Catalánကိုထိမှန်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » URSA အသံလွှင့် Capture ချီလီရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး Amoreala Catalan Hit
URSA အသံလွှင့် Capture ချီလီရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး Amoreala Catalan Hit
Fremont, CA - အောက်တိုဘာလ 3, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ချီလီထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ, AGTV တစ်ဦးအပြည့်အဝထည့်သွင်းကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Blackmagic ဒီဇိုင်း တူးမြောင်း 13, ချီလီအတွက်ဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးရုပ်မြင်သံကြားဘူတာရုံအတွက် "a la Catalan Amore" ဟုအဆိုပါ hit ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးထုတ်လုပ်ရန်ခြောက်လ URSA အသံလွှင့်ကင်မရာများအပါအဝင်လုပ်ငန်းအသွားအလာ, ။
"Amore တစ်ဦး, La Catalan" ကောင်းချီးရုပ်မြင်သံကြားဒါရိုက်တာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, Vicente Sabatini နှင့် AGTV, ပါပလောÁvila၏ telenovela ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပိုင်ရှင်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဒါရိုက်တာတစ်ဦးအချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှုတော်တို့ကိုရှိပြီးသားဒုတိယရာသီနှင့်အတူတူးမြောင်း 13 ပေါ်မှာဤနွေရာသီပြသဖို့တော်မူပြီးမှ, စီးရီးဖာနန်ဒိုထက်ပိုသုံးဆယ်နှစ်ပေါင်းသူ့မိသားစုကနေလျှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်သူတစ်ဦးစားတော်ဝန်၏ဇာတ်လမ်းပြောပြသည်။
နေဆဲဘတ်ဂျက်အပေါ်တည်းခိုနေစဉ်မြင့်မားထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးဘဝကိုဖို့ပုံပြင်ကိုရောက်စေဖို့, AGTV တစ်ဦးထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ် Blackmagic ဒီဇိုင်း အဆိုပါ URSA အသံလွှင့်ကင်မရာများနှင့်အတူ စတင်. လုပ်ငန်းအသွားအလာ။
"ကျနော်တို့ကတူးမြောင်း 13 အသုံးပြုသောဘယ်လိုသိမြင်လျှင် Blackmagic ဒီဇိုင်း ကျနော်တို့အတူတူအရည်အသွေးကိုအောင်မြင်ရန်ဖို့လုပ်ငန်းအသွားအလာထပ်ဖွလိုချင် '' Runaways, 'နှင့်ပေါ်, "ကဲသာဘုရင် Norambuena, AGTV မှာစစ်ဆင်ရေးမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ " 'Amoreala Catalan' 'ငါတို့သည်အုပ်စုနှစ်စုသို့ခွဲဝေ URSA ထုတ်လွှင့်ခဲ့: ယူနစ်တဦးတည်းစတူဒီယို၌အကြှနျုပျတို့၏အဓိကကင်မရာများအဖြစ်အသုံးပြုသုံးခုကင်မရာများပါဝင်သည်နှင့်ယူနစ်နှစ်ခုပြင်ပမြင်ကွင်းများဘို့အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောကင်မရာနှစ်ခုပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဋ္ဌကင်မရာအမှုထမ်းများအတွက် backup လုပ်ထားအဖြစ်လည်ပတ်အလုပ်လုပ်နေတယ်။ "
တစ်ချိန်ကစတူဒီယိုမှာသုံးကင်မရာများ အသုံးပြု. အသုံးပြုပုံ Norambuena နှင့်သင်္ဘောသားမကြာခဏသရုပ်ဆောင်တွေကနေမတူညီတဲ့ထောင့်သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုကိုဖမ်းယူဖို့ reshoots ဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေး, တဦးတည်း ယူ. အတွက်မြင်ကွင်းများရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကင်မရာများ '' ဘက်ထရီအမြဲစွဲချက်တင်နှင့်အတူယူနစ်နှစ်ခုအိမ်ပြင်ရိုက်ကူးဖို့လိုအပျအဖြစ်အမှုထမ်းသူတို့ကိုဖမ်းပြီးခွင့်, "ဖမ်းပြီး go" ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ထူထောင်ခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ကူညီနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါသင်္ဘောသား, အရောင်ချိန်ခွင်လျှာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ချိန်ညှိတစ်ခု ATEM ကင်မရာ Control Panel ထဲကကိုအသုံးပြုရှပ်တာအမြန်နှုန်းနှင့်ပိုရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းအခြားအလိုအပ်ချက်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကင်မရာအမှုထမ်းလွတ်မြောက်စေဖို့။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညွန့်တဆယ်နာရီအထိကြာရှည်နိုင်ပါတယ်, နှင့် URSA ထုတ်လွှင့်ကိုငါတို့ကျရှုံးဖူးဘူး," Norambuena မှတ်ချက်ချသည်။ "သူတို့ကအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုထမ်းလျင်မြန်စွာရှည်လျားသောအညွန့်ကာလအတွင်းထိထိရောက်ရောက်သူတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အသုံးပြုနိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ camera ကိုသင်္ဘောသား၏အင်္ဂါအများရှိပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ကင်မရာများဖို့အသုံးပြု, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရိုးရာထုတ်လွှင့်ထိန်းချုပ်မှုပေမယ့်ရုပ်ရှင် features တွေနှင့်အတူအခြေခံအားဖြင့်နှစ်ခုတကြောင်းကင်မရာရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခဲ့ကြသည်။ "
Norambuena နှင့်သင်္ဘောသား 4K အတွက်ရိုက်ကူးဖို့ URSA အသံလွှင့်ရဲ့စွမ်းရည်အဖြစ်က၎င်း၏ကြွယ်ဝသောအရောင်များနှင့်ပြတ်သားပုံများ, သူတို့ရဲ့တည်ဆဲမှန်ဘီလူးသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများများအတွက်ကျယ်ပြန့်ထောက်ခံမှု၏အားသာချက်ကိုယူ။
AGTV လည်း ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကိုထည့်သွင်း HD အပိုဆောင်းမှတ်တမ်းတင်တစ် SmartScope Duo 4K မော်နီတာနှင့်ကင်မရာကိုအော်ပရေတာဒါရိုက်တာစဉ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိခွင့်ပြုခဲ့သည့် ATEM Talkback Converter 4K များအတွက်နှစ်ဦးစလုံးကင်မရာယူနစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှင့် ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု Switcher တစ် HyperDeck စတူဒီယို Mini ကိုအသံဖမ်း action ကိုမပြတ်မတောက်ဖြစ်ပျက်ပါစေနိုင်ရန်အတွက် URSA ထုတ်လွှင့်မှမိမိတို့တစတစဝေးကွာ။
"အသုံးပြုခြင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း ဒီထုတ်လုပ်မှုအပေါ်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံကဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂီယာချောမွေ့စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီးအရည်အသွေးထိပ်တန်းထစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့နောက်ရာသီ '' Amore တစ်ဦး, La Catalan '' ကိုစတင်စိတ်လှုပ်ရှားနေနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်ယုံကြည်စိတ်ချ Blackmagic ဒီဇိုင်း တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်, "Norambuena ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
URSA အသံလွှင့်, ATEM ကင်မရာ Control Panel ထဲက, ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကို၏ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံများ HD, ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K, HyperDeck စတူဒီယို Mini ကို, SmartScope Duo 4K နှင့် ATEM Talkback Converter 4K အဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ATEM ကင်မရာ Control Panel ထဲက ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K atem TalkBack converter ကို 4k ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကို HD ကို Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု SmartScope Duo 4K SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် URSA အသံလွှင့်ကင်မရာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-10-03
ယခင်: Artjail Baselight အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်နှင့်အတူဘားပေါ်ပေါက်
နောက်တစ်ခု: LSS Productions Sondheim ရဲ့ဆုချီးမြှင့်ဂျော့ဂ်ျနှင့်အတူ Park မှာဂီတနင်္ဂနွေနေ့အနိုင်ရရှိမှုသည် DPA ရဲ့အသေးဆုံးနားကြပ်မိုက်ခရိုဖုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံ